ကယားကျောဖီစိုကျပြိုးတောငျသူမြားနှငျ့ အောငျနလေငျးထှနျး ကုမ်ပဏီတို့ လကျမှတျထိုး - DVB
ကယားကျောဖီစိုကျပြိုးတောငျသူမြားနှငျ့ အောငျနလေငျးထှနျး ကုမ်ပဏီတို့ လကျမှတျထိုး
ကယားပွညျနယျမှ ကျောဖီစိုကျပြိုးတောငျသူတှနေဲ့ အောငျနလေငျးထှနျး ကုမ်ပဏီ လီမိတကျ (ဉာဏျကွီးရှငျ ရှမျးတောငျမွငျ့ကျောဖီ) တို့ သဘောတူညီလကျမှတျထိုးပှဲကို စကျတငျဘာလ ၇ ရကျနကေ့ လှိုငျကျောမွို့ ပွညျနယျခနျးမမှာ ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
ဒီအခမျးအနားမှာ အောငျနလေငျးထှနျး ကုမ်ပဏီ လီမိတကျတာဝနျရှိသူတှေ၊ ကယားပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျနဲ့ အစိုးရဖှဲ့တှအေပွငျ တောငျသူတှလေညျး တကျရောကျခဲ့ကွပါတယျ။
အဆိုပါ ကတိပွုစာခြုပျမှာ ဈေးကှကျမှလကျခံသော၊ အမှာရှိတဲ့ မြိုးစသေ့ဈကို ထောကျပံ့ပေးဖို့၊ တောငျသူဘကျ မွေ၊ လုပျအား၊ သှငျးအားစုယာဉျကခြံနိုငျမှုတှေ သတျမှတျဖို့၊ စိုကျပြိုးမှုနညျးပညာနဲ့ ရိတျသိမျးမှုနညျးပညာထောကျပံ့မှု၊ ရိတျသိမျးတဲ့အခြိနျမှာ အရညျအသှေးနဲ့ ဈေးနှုနျးသတျမှတျပွီး ရာသီတခုစာ တညျငွိမျးတဲ့ဈနှေုနျးနဲ့ဝယျယူပေးဖို့ စတဲ့အခကျြတှကေို သဘောတူလကျမှတျရေးထို ကွတာဖွဈပါတယျ။
အောငျနလေငျးထှနျးကုမ်ပဏီတညျထောငျသူ ဦးငှထှေနျးက “တျောတျောမြားမြားက ဒိလိုမြိုးစာခြုပျနဲ့လုပျတယျဆိုရငျကွောကျကွတယျ။ ဘယျလိုမြိုး ဖွဈမှာလဲပေါ့။ ကနြျောတို့ စာခြုပျရဲ့ပုံစံက တောငျသူရဲ့တတျနိုငျမှုအပျေါမှာမူတညျပါတယျ။ တခြို့က မွပေဲတတျနိုငျတယျ။ တခြို့က အလုပျသမားတတျနိုငျတယျ။ တခြို့က သှငျးအားစုတတျနိုငျတယျ။ တခြို့က ယာဉျတို့၊ ပို့ဆောငျရေးတို့ဘကျမှာတတျနိုငျတယျ။ ဒီအပျေါမှာမူတညျပွီး ကနြျောတို့စာခြုပျခြုပျပါတယျ။ ” လို့ အခမျးအနားအတှငျးမှာ ပွောပါတယျ.
ဒါ့အပွငျ ကုမ်ပဏီဘကျက ပေါကျဈေးအတိုငျးဝယျယူမှာဖွဈပွီး မဝယျယူနိုငျရငျတော့ ဆုံးရှုံးနဈနာမှုတှကေို တာဝနျယူတာဝနျခံမယျဆိုတာကိုလညျး စာခြုပျမှာ ထညျ့ခြုပျထားတယျလို့လညျး အောငျနလေငျးထှနျးကုမ်ပဏီတညျထောငျသူ ဦးငှထှေနျးက ပွောပါတယျ။
ကယားပွညျနယျမှာ အခု ၂၀၁၉ ခုနှဈအတှငျး ကျောဖီဧက ၄၀၀ ခနျ့အထိ တိုးခြဲ့စိုကျပြိုးဖို့ရှိပွီး လြာထားပွီး တနှဈကို ကျောဖီတနျ ၁၂၀ အထိ ထုပျလုပျဖို့ ရညျမှနျးထားတယျလို့ ဦးငှထှေနျးက အခမျးအနားမှာ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
“ဟိုယာ၊ ဘီယာဒသေမှာ ဧက ၂၀ နောကျပွီး လှိုငျလငျလေး ဒသေမှာ ၁၀ ဧက နောကျတခုကတော့ ရှားတော့မှာ ၁၀ ဧက ကနြျောတို့ဒါကို ဒီနှဈမှာစပွီးတော့ pilot project နဲ့စတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျောဖီစိုကျပြိုးမှု စနဈတှကေို ကနြျောတို့ပေးပွီးမှ နောကျလူတှကေို ဒီဟာကိုကွညျ့ပွီးတော့ ဆကျလကျပွီးတော့လုပျကိုငျနိုငျဖို့ ဆိုပွီးတော့ ကနြျောတို့ ဒီ pilot project ကို စပါတယျ။ အဲတော့ ဒီနှဈ ၂၀၁၉မှာ ကနြျောတို့ ဧက ၁၅၀ လောကျလောလောဆယျ စိုကျပြိုးဖို့ဆိုပွီးတော့ ကတိပေးထားတာရှိပါတယျ။ ကနြျောတို့ ဒီနှဈမှာ ခနျ့မှနျခွအေားလုံးပေါငျး ဧက ၄၀၀ ကယားပွညျနယျတခုတညျးမှာ စိုကျဖို့ဆိုပွီးတော့ ရညျရှယျထားပါတယျ။ ”
ဒါ့အပွငျ လကျရှိမှာလညျး ကယားပွညျနယျကထှကျရှိတဲ့ ကျောဖီတှကေို စငျကာပူ၊ ဂပြနျနဲ့ ဟောငျကောငျတို့မှာ ကယားပွညျနယျကျောဖီဆိုပွီးရောကျရှိ ရောငျးခနြပွေီလို့လညျး ပေါပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဒီကျောဖီစိုကျပြိုးထုတျလုပျမှုအားဖွငျ့ အမြိုးသား ၄၀ ရာခိုငျနှုနျးနဲ့ အမြိုးသမီး ၆၀ ရာခိုငျနှုနျးကို အလုပျအကိုငျ ဖနျတီးပေးနိုငျမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ကျောဖီအပွငျတခွား OGENIC သီးနှံတှဖွေဈတဲ့ လကျဖကျ၊ ပငျမှညျ့၊ ငရုတျနဲ့ ဂပြနျနိုငျငံက ရှဖေရုံသီးတှကေိုလညျး စိုကျပြိုးနိုငျအောငျ လြာထားတယျလို့လညျး ပွောပါတယျ။
ဒသေခံအဖှဲ့အစညျးတခုဖွဈတဲ့ ကယားဖူးအဖှဲ့အစညျးက တာဝနျရှိသူတဦးဖွဈတဲ့ ဒျေါနျောလေးမွာကတော့ တောငျသူတှအေတှကျ လိုအပျနတော နညျးပညာနဲ့ ဈေးကှကျသာ လိုအပျတယျလို့ ပွောပါတယျ။
“တကယျတမျးကတြော့ တောငျသူက အရေးကွီးဆုံးကတော့ နညျးပညာဖွဈပါတယျ။ ဆိုတော့ သူတို့ကို စနဈတကနြဲ့ နညျးပညာခပြွပေးရငျတော့ သူတို့က ကောငျးကောငျးနဲ့ စိုကျပြိုးနကွေပဲဆိုတော့ ဒီထကျကောငျးမှနျတဲ့ အရညျအသှေးတှတေကျလာမှာပေါ့။ နောကျပွီးတော့ အဓိကတော့ ဈေးကှကျ ခြိတျဆကျမှုပါပဲ။ တကယျတမျးကတြော့ ကမြတို့ဆီမှာ တနိုငျတပိုငျစိုကျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဈေးကှကျရောငျးတဲ့အခါမှာ ထုတျလုပျမှုစနဈကလညျး နညျးနညျးလေးအားနညျသေးတဲ့အခါမှာ ဈေးကှကျက ကမြတို့ လိုခငျြတဲ့ဈေးကှကျမရဘူးပေါ့။ ဒါပမေယျ့ အခုဈေးကှကျကို ဝငျဖို့ ဒီဉာဏျကွီးရှငျကို ကမြတို့ ရောငျးတဲ့အခါမှာ ကမြတို့လိုခငျြတဲ့ ဈေးကှကျကိုပေးမယျ။ ဆိုတော့ စနဈတကထြုတျလုပျတတျမယျ အရညျအသှေးကောငျးမှနျ လာပွီဆိုလို့ရှိရငျ ဈေးကှကျမွငျ့သှားပွီလေ။ ”
အောငျနလေငျးထှနျး ကုမ်ပဏီလီလီမိတကျ (ဉာဏျကွီးရှငျ ရှမျးတောငျမွငျ့ကျောဖီ)ဟာ မွနျမာနိုငျငံတဝှမျးက ကျောဖီတှကေို ဝယျယူပွီး ကျောဖီအမြိုးအစား ၂၅ မြိုးလောကျထုတျလုပျပွီး ပွညျတှငျးပွညျပကို ဖွနျ့ဖွူ ရောငျးခနြပေါတယျ။
ပွညျအနနေဲ့ နိုငျငံပေါငျး ၂၀ ကြျောကိုပေးပို့ရောငျးခနြပွေီး ဂပြနျနိုငျငံကို အဓိက တငျပို့ရောငျးခနြတောလညျးဖွဈပါတယျ။
ကယားကော်ဖီစိုက်ပျိုးတောင်သူများနှင့် အောင်နေလင်းထွန်း ကုမ္ပဏီတို့ လက်မှတ်ထိုး
ကယားပြည်နယ်မှ ကော်ဖီစိုက်ပျိုးတောင်သူတွေနဲ့ အောင်နေလင်းထွန်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (ဉာဏ်ကြီးရှင် ရှမ်းတောင်မြင့်ကော်ဖီ) တို့ သဘောတူညီလက်မှတ်ထိုးပွဲကို စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က လွိုင်ကော်မြို့ ပြည်နယ်ခန်းမမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားမှာ အောင်နေလင်းထွန်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက်တာဝန်ရှိသူတွေ၊ ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ အစိုးရဖွဲ့တွေအပြင် တောင်သူတွေလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဆိုပါ ကတိပြုစာချုပ်မှာ ဈေးကွက်မှလက်ခံသော၊ အမှာရှိတဲ့ မျိုးစေ့သစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့၊ တောင်သူဘက် မြေ၊ လုပ်အား၊ သွင်းအားစုယာဉ်ကျခံနိုင်မှုတွေ သတ်မှတ်ဖို့၊ စိုက်ပျိုးမှုနည်းပညာနဲ့ ရိတ်သိမ်းမှုနည်းပညာထောက်ပံ့မှု၊ ရိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာ အရည်အသွေးနဲ့ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပြီး ရာသီတခုစာ တည်ငြိမ်းတဲ့ဈေနှုန်းနဲ့ဝယ်ယူပေးဖို့ စတဲ့အချက်တွေကို သဘောတူလက်မှတ်ရေးထို ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အောင်နေလင်းထွန်းကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ ဦးငွေထွန်းက “တော်တော်များများက ဒိလိုမျိုးစာချုပ်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်ကြောက်ကြတယ်။ ဘယ်လိုမျိုး ဖြစ်မှာလဲပေါ့။ ကျနော်တို့ စာချုပ်ရဲ့ပုံစံက တောင်သူရဲ့တတ်နိုင်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ တချို့က မြေပဲတတ်နိုင်တယ်။ တချို့က အလုပ်သမားတတ်နိုင်တယ်။ တချို့က သွင်းအားစုတတ်နိုင်တယ်။ တချို့က ယာဉ်တို့၊ ပို့ဆောင်ရေးတို့ဘက်မှာတတ်နိုင်တယ်။ ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီး ကျနော်တို့စာချုပ်ချုပ်ပါတယ်။ ” လို့ အခမ်းအနားအတွင်းမှာ ပြောပါတယ်.
ဒါ့အပြင် ကုမ္ပဏီဘက်က ပေါက်ဈေးအတိုင်းဝယ်ယူမှာဖြစ်ပြီး မဝယ်ယူနိုင်ရင်တော့ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေကို တာဝန်ယူတာဝန်ခံမယ်ဆိုတာကိုလည်း စာချုပ်မှာ ထည့်ချုပ်ထားတယ်လို့လည်း အောင်နေလင်းထွန်းကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ ဦးငွေထွန်းက ပြောပါတယ်။
ကယားပြည်နယ်မှာ အခု ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ကော်ဖီဧက ၄၀၀ ခန့်အထိ တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးဖို့ရှိပြီး လျာထားပြီး တနှစ်ကို ကော်ဖီတန် ၁၂၀ အထိ ထုပ်လုပ်ဖို့ ရည်မှန်းထားတယ်လို့ ဦးငွေထွန်းက အခမ်းအနားမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ဟိုယာ၊ ဘီယာဒေသမှာ ဧက ၂၀ နောက်ပြီး လွိုင်လင်လေး ဒေသမှာ ၁၀ ဧက နောက်တခုကတော့ ရှားတော့မှာ ၁၀ ဧက ကျနော်တို့ဒါကို ဒီနှစ်မှာစပြီးတော့ pilot project နဲ့စတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကော်ဖီစိုက်ပျိုးမှု စနစ်တွေကို ကျနော်တို့ပေးပြီးမှ နောက်လူတွေကို ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဒီ pilot project ကို စပါတယ်။ အဲတော့ ဒီနှစ် ၂၀၁၉မှာ ကျနော်တို့ ဧက ၁၅၀ လောက်လောလောဆယ် စိုက်ပျိုးဖို့ဆိုပြီးတော့ ကတိပေးထားတာရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီနှစ်မှာ ခန့်မှန်ခြေအားလုံးပေါင်း ဧက ၄၀၀ ကယားပြည်နယ်တခုတည်းမှာ စိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ”
ဒါ့အပြင် လက်ရှိမှာလည်း ကယားပြည်နယ်ကထွက်ရှိတဲ့ ကော်ဖီတွေကို စင်ကာပူ၊ ဂျပန်နဲ့ ဟောင်ကောင်တို့မှာ ကယားပြည်နယ်ကော်ဖီဆိုပြီးရောက်ရှိ ရောင်းချနေပြီလို့လည်း ပေါပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီကော်ဖီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအားဖြင့် အမျိုးသား ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အမျိုးသမီး ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကော်ဖီအပြင်တခြား OGENIC သီးနှံတွေဖြစ်တဲ့ လက်ဖက်၊ ပင်မှည့်၊ ငရုတ်နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက ရွှေဖရုံသီးတွေကိုလည်း စိုက်ပျိုးနိုင်အောင် လျာထားတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်တဲ့ ကယားဖူးအဖွဲ့အစည်းက တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်နော်လေးမြာကတော့ တောင်သူတွေအတွက် လိုအပ်နေတာ နည်းပညာနဲ့ ဈေးကွက်သာ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“တကယ်တမ်းကျတော့ တောင်သူက အရေးကြီးဆုံးကတော့ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ သူတို့ကို စနစ်တကျနဲ့ နည်းပညာချပြပေးရင်တော့ သူတို့က ကောင်းကောင်းနဲ့ စိုက်ပျိုးနေကြပဲဆိုတော့ ဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အသွေးတွေတက်လာမှာပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ အဓိကတော့ ဈေးကွက် ချိတ်ဆက်မှုပါပဲ။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကျမတို့ဆီမှာ တနိုင်တပိုင်စိုက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဈေးကွက်ရောင်းတဲ့အခါမှာ ထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကလည်း နည်းနည်းလေးအားနည်သေးတဲ့အခါမှာ ဈေးကွက်က ကျမတို့ လိုချင်တဲ့ဈေးကွက်မရဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခုဈေးကွက်ကို ဝင်ဖို့ ဒီဉာဏ်ကြီးရှင်ကို ကျမတို့ ရောင်းတဲ့အခါမှာ ကျမတို့လိုချင်တဲ့ ဈေးကွက်ကိုပေးမယ်။ ဆိုတော့ စနစ်တကျထုတ်လုပ်တတ်မယ် အရည်အသွေးကောင်းမွန် လာပြီဆိုလို့ရှိရင် ဈေးကွက်မြင့်သွားပြီလေ။ ”
အောင်နေလင်းထွန်း ကုမ္ပဏီလီလီမိတက် (ဉာဏ်ကြီးရှင် ရှမ်းတောင်မြင့်ကော်ဖီ)ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းက ကော်ဖီတွေကို ဝယ်ယူပြီး ကော်ဖီအမျိုးအစား ၂၅ မျိုးလောက်ထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပကို ဖြန့်ဖြူ ရောင်းချနေပါတယ်။
ပြည်အနေနဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော်ကိုပေးပို့ရောင်းချနေပြီး ဂျပန်နိုင်ငံကို အဓိက တင်ပို့ရောင်းချနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Tags: ကယားကျောဖီစိုကျပြိုးတောငျသူမြားနှငျ့ အောငျနလေငျးထှနျး ကုမ်ပဏီတို့ လကျမှတျထိုး
Previous story လှတျလပျမြှတမှုမရှိသညျ့ တရားစီရငျရေးစနဈနှငျ့ စဈပှဲအလိုမရှိကွောငျး ကခငျြစဈရှောငျမြား ဆန်ဒပွ
Next story နာမညျကွီး It Chapter Two ရုပျရှငျ ကနျဒျေါလာ ၉၁ သနျးဖွငျ့ ရုံတငျဝငျငှေ ထိပျဆုံးဦးဆောငျ